वर्णको साथ-साथ अवर्ण: यी पुरूषसबैकोलागि आउने छन् - सत्य वेद पुुस्तकहरू
हामीले सिकेका छौ किप्राचीनवेदहरुले आउनुहुने व्यक्तितर्फ पहिलेनै कसरी हेरेको थियो। हामीले ऋग्वेदमापुरुष सूक्ति को पुस्तकको साथ आरम्भ गरेका थिऔ। त्यसपछि हामीले हिब्रू वेदहरुको साथ आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउदै, यो सुझावदियौ कि संस्कृत र हिब्रू वेदहरु (बाइबल) दुबैको भविष्यवाणी येशू सत्संग (नासरतको येशू) द्वारा पुरा गरिएको थियो
यस कारण नासरत को येशू भविष्यवाणी गरिएको पुरुष या मसीह हुनुहुन्थ्यो? के उहाँ केवल एउटा निश्चित धार्मिक समूहको लागि मात्र आउनु भएको थियो, याउ हाँ सबै जातिको लागि आउंदै हुनुहुन्थियो– जसमा सबै जातिहरु, वर्णदेखि लिएर अवर्ण सबै सम्मलित छन्।
पुरुष सूक्तिमा जाति (वर्ण) व्यवस्था
पुरुष सूक्ति ले यस पुरुषको बारेमा यस्तो भनेका छन:
पुरुष सूक्ति श्लोक 11-12 – संस्कृत मा नेपाली अर्थ
ऊरूतदस्ययदवैश्यःपद्भ्यांशूद्रोअजायत || 11 जबउनीहरुले यी पुरुषलाई विभाजित गरे तब उनीहरुले उहाँको कति टुक्रा बनाए?
उनीहरुले उहाको मुख, उहाको हातलाई के भने? उहाँक सफ्रा र खुट्टालाई के भने?
12 ब्राह्मणउहाँको मुख थियो, उहाँको दुबै बहुली बाट उहाँको दुई राजान्या बन्थियो।
उहाँको सफ्रा वैश्य बन्यो, उहाँको पैतला देखि शूद्रको उत्पत्ति भयो।
संस्कृतवेदहरुमा जातियावर्णको पहिलो उल्लेख पाइन्छ। यो यस पुरुष को शरीर बाट अलग हुने चार जातिको कुरा गर्द्छन। ब्राह्मणजाति/वर्ण उहाँको मुख द्वारा आएको हो, राजान्या (जसलाई आजक्षत्रियजाति/वर्णको रूपमा चिनिन्छ), उहाँको सफ्रा बाट वैश्यजाति/वर्ण, र उहाँको खुट्टा बाट शुद्रजाति आएको थियो। वेदहरु रचित पुरुष हुनुको लागि येशूलाई यी सबै जातिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुन पर्छ ।
के उहाँ नै हो?
ब्राह्मणर क्षत्रिय को रूपमा ख्रीष्ट
हामीले हेरौ ‘ख्रीष्ट ‘ या मसीहएउटा प्राचीनहिब्रू पदवीहो जसको अर्थ’शासक’ हो – वास्तवमा राजाहरुको राजा सँग छ। ‘ख्रीष्ट’ को रूपमा, येशू पूर्ण रुपले क्षत्रिय को पहिचान राख्नु हुन्छ र यस को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्छ। हामीले यो पनि हेरौ कि ‘शाखा’ को रूप मा येशू लाई एउटा पुरोहितको रूप मा आउनु हुने भविष्यवाणी गरिए को थियो, त्यसैले उहाँ पूर्ण रुपले आफ्नो पहिचान ब्राह्मणक सगं राख्नु हुन्छ रत्यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्छ। सत्य यो हो कि हिब्रू भविष्यवाणीले यो संकेत दिए को छ कि उहाँ एउटा पुरोहित(पण्डित ) अर्थात् याजक र राजा दुबै को भूमिका हरु लाई एक व्यक्तिले लाई पूर्ण गर्नु हुनेछ।
‘…र त्यो महामहिमाले पहिर्याइनेछ र आफ्नो सिंहासनमा विराजमान भएर राज्य गर्ने छ, र त्यो सिंहासनमा एउटा पुजाहारी हुनेछ। अनि दुवैको बिचमा मिलाप हुनेछ ‘ (जकरिया 6:13)
येशू वैश्य को रूपमा
हिब्रू ऋषिगणहरु/भविष्यवक्ताहरु ले यो पनि भविष्यवाणीगरे किआउनु हुने पुरूष एउटा व्यापारी जस्तै हुनुको कारण, एउटा व्यापारी बन्ने छ। यस भविष्यवाणी लाई यशैया (750 ईसा पूर्व) ले बाइबलमा गरे को थियो:
त मेरो दृष्टिमा बहुमुल्य र आदरणीय भएको ले र मैले तलाई प्रेम गरेको कारणले, म मानिसहरुलाई तेरो सट्टा, र जाति जातिलाई तेरो जीवनको सट्टा दिनेछु । (यशायाह 43:4)
यहा निर परमेश्वर भविष्यवाणी को रूपमा आउने हुने को बारेमा भविष्यवाणी, यो भन्दै गरि राखे को छ कि उहाँ वस्तुहरु को व्यापार गर्नु हुनेछैन, अपितु उहाँले आफ्नो जीवन को बदलामा मानिसहरुको व्यापार गर्नु हुनेछ। यस प्रकारले आउनु हुने त्यो पुरूष अर्थात् व्यक्ति एउता व्यापारी हुन सक्छ, जसले मानिसलाई मुक्त पर्न व्यापार गर्नु हुनेछ। एउटा व्यापारीको रूपमा उहाँ ले स्वयं आफै लाई वैश्य को रुपमा पहिचान गराउनु भयो र उनीहरु को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्छ।
शुद्र – दास
ऋषिगणहरु/भविष्यवक्ताहरुले एउटा दास या शुद्र को रूपमा यी आउनु हुने व्यक्तिको भूमिका को बारे मा विस्तारले बताएका छन। हामीले हेरौ कि कसरी भविष्यवक्ता हरु ले भविष्यवाणी गरे का थिए कि शाखा एक दास अर्थात् नौकर पनि हुनेछ जस को काम पाप हरुलाई टाढा गर्ने हो:
“‘हे यहोशू प्रधान पुजारी, तेरो सामुन्ने बस्ने तेरो साथीहरु,जो पछि हुने कुराका चिन्नजस्ता छन:यी कुरा सुन, हेर् म मेरो दास अर्थात् हाँगा लाई ल्याउनेछु…र एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउने छु। (जकरिया 3:8-9)
आउनु हुने शाखा, जो एक पुरोहित, शासक र व्यापारी थिए, साथमा एउटा दास – शुद्रपनि थिए। यशैया ले दास (शूद्र) को रूपमा यस पुरूषको भूमिको बारेमा विस्तारमा भविष्यवाणी गरे। यस भविष्यवाणीमा परमेश्वर यस शूद्र पुरूष को कामहरु को माथि ध्यान दिन को लागि इस्राएल बाट ‘टाढा’ सबै जातिहरुलाई परामर्श दिनु हुन्छ (जसमा तपाई र मसमिलित छौ)।
1 हेटापुहरु हो, मेरो कुरा सुन;
हेटा ढाका जाति हो, यो कुरा सुन!
जन्म नु भन्दा अधि परम प्रभु ले मलाई बोला उनु भयो,
मेरो जन्म देखि नै उहाँले मेरो नाउ को चर्चा गर्नु भए को छ ।
2 उहाँ ले मेरो मुख लाग्‍ने तरवार जस्‍तै बना उनु भयो।
उहाँ ले मलाई आफ्‍नो हात को छहारी मुनि लुकाउनु भयो।
उहाँ ले मलाई चिल्‍लो र टल्‍क ने काँड़ बना उनु भयो,
रमलाई आफ्‍नो ठोक्रोमा लुका इराख्‍नुभयो।
3 उहाँ ले मलाई भन्‍नुभयो, “तँ मेरो दास इस्राएल होस्‌,
तँ मा नै मेरो ऐश्‍वर्य म प्रकट गर्ने छु।”
4 तर मैले भनें, “मैले के ही अभिप्राय न राखी परिश्रम गरें।
मैले व्‍यर्थमा र शून्‍यताको लागि मेरो बल खर्च गरें।
तापनि जे मैले पाउनु पर्छ, त्‍यो परमेश्‍वर को हातमा छ,
र मेरो प्रतिफल मेरा परमेश्‍वरसित छ।”
5 अब परम प्रभु भन्‍नु हुन्‍छ– जसले मलाई उहाँ को दास हुन,
याकूब लाई फेरि उहाँ कहाँ ल्‍याउन,
र इस्राएललाई उहाँ कहाँ जम्‍मा गर्न गर्भ देखि नै रच्‍नुभयो,
किन कि परमप्रभुको दृष्‍टिमा म मानको गनिएको छु,
र मेरा परमेश्‍वर मेरो बलहुनुभएको छ–
6 उहाँ भन्‍नुहुन्‍छ: “याकूबका कुलहरू लाई
फेरि पुनर्स्‍थापन गर्न र इस्राएलको बाँकी भागलाई
फेरि फर्काई ल्‍याउन तँ मेरो दास हुने कुरो तेरो लागि अति सानो कुरो छ।
पृथ्‍वीको पल्‍लो छे उसम्‍म तैंले मेरो उद्धार
पुर्‍याओस्‌ भनी अन्‍यजाति हरू कहाँ
एउटा ज्‍योति पनि म तँलाई बनाउने छु।”(यशैया 49:1-6)
यद्यपि हिब्रू/यहूदी जाति बाट आउने हुनेको बारेमा भविष्यवाणीले यो भनेको छ यस दास को सेवा ‘पृथ्वीको एक तर्फ बाट अर्को तर्फ फैलिनेछ’। यद्यपि यहूदी, येशूको सेवा ले वास्तवमा पृथ्वीको सम्पूर्ण जातिहरु लाई स्पर्श गरेको छ, जस्तो या दासको प्रति भविष्यवाणीगरे को थियो। दासको रुपमा, येशूले आफ्नो पहिचान पूर्ण रुपले सबै शुद्रको साथमा राख्नु हुन्छ र उनी हरु को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्छ।
अवर्ण को पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ
सबै मानिस हरुको लागि मध्यस्थता गर्ने को लागि येशू लाई अवर्ण, या अनुसूची जातिहरु, जनजातिहरु र दलितहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हुन्छ। यो कसरी हुनेछ? यशैया क अर्को एउटा भविष्यवाणीले पहिला देखि नै भनि सके को छ कि उहाँ पूर्ण रुपमा तोडिनु हुनेछ रतुच्छ मानिनेछ। उहाँ हामी सबै को कारणले अवर्ण को रूपमा हेर्ने छन।
यहाँ केहि स्पष्टीकरणहरुको साथ भविष्यवाणी लाई पूर्ण रुपमा दिएको छ। तपाईले हेर्नु हुने छ कि यी ‘उनि’ र ‘उनीलाई’ हुनेको कुरा बताउद छ, त्यसैले यसले आउनु हुने व्यक्ति अर्थात् पूरूषको भविष्यवाणी गरि रहेको छ। किन भने भविष्यवाणीले ‘जरा’ के चित्रको उपयोग गर्दछ, त्यसैले हामीलाई यो थाहा छकि यो त्यही शाखाको वर्णन गर्दै छ, जो पुरोहित र शासक पनि थिए। तर यसको विवरण भिन्न छ।
आउनु हुने एउटा तुच्छ व्यक्ति हुनुहुन्छ
1 जुन समाचार हामीलाई दिएको छ, उहाँको विश्वास कसले गर्यो?
र यहोवाको भुजबल क समाथि प्रगट भयो?
2 किनकी उहाँ उनको [परमेश्वर] सामुनेअंकुर को समान,
रयस्तो जराको समानउ म्रियो जो निर्जल भूमिमा फूटयो;
त्यसको नतकुनै सुन्दरता थियो कि हामीले यसलाई देख्न सकौ,
र नत उहाँको रूपनै हामीलाई देखा पर्यो
कि हामी उनको चाहना गछौ।
3 ऊ तुच्छ जनिन्नेछ रमा निसहरु बाट त्यागिएको थियो;
ऊ दु:खीपुरूष थिए, पिडासँग परिचित थिए;
र मानिसहरुले ऊ देखी मुख लुकाउने छन। ऊ तुच्छ भयो,
र, हामीले उहाँ को मूल्य जानेनौ।
परमेश्वर को सामु ‘जरा’ (अर्थात्ब र को शाखा) हुनुको पश्चात् पनि, यस व्यक्ति अर्थात् पुरूषलाई अरु द्वारा ‘तुच्छ’ र ‘त्यागिएको’, ‘पीड़ाले भरिएको’ र ‘जसको कुनै मूल्य नभएको’ मानिन थियो। उनलाई वास्तवमा अछूत मानियो। आउनु हुने यो व्यक्ति या पुरूष पनि अनुसूची जनजातिहरु (वनवासी) र पछाडीएको जातियहरु – दलितहरुको प्रतिनिधित्व अछूतहरुको रूपमा मनदेखि टूटेका मानिसहरुको रूपमा गर्न सक्षम हुन्छ।
4 निश्चय उनले हाम्रो पिडाहरु सहेका छन्
र हाम्रो दु:खलाई उठाउने छन;
र पनि हामीले त्यही परमेश्वर लाई कुटपिट गर्यौ अनि मारी दियौ
र दुर्दशामा पिडा भएको समझौ।
5तर उनी हाम्रो अपराधको कारण घायल गरि दिए,
उनी हाम्रो अधर्मको कामहरुको कारण कुल्चिए;
हाम्रो नै शान्तिको लागि उहाँ माथि ताड़ना भयो
कि उहाँले कोर्रा सहे को कारण हामी निको भयौ।
हामी कहिले कहिँ अरुको दुर्भाग्यमा दोष लगाउने गछौ, या तिनीहरुलाई निम्न स्तरको रूपमा हेर्छौ जो समाजमा,कुनै कारणवश या कर्म, उनको पापहरुको कारण तल्लो श्रेणीमा छन। यस भविष्यवाणीमा भनिएकोछ कि यस व्यक्ति या पुरूषको दुःखयति अधिक हुनेछ कि हामीले यसरी सोच्न कि यस्तो उनलाई परमेश्वर द्वारा दण्ड दिएको हो यही कारण हो कि उनी तुच्छ मानिनेछ। तर उनलाई आफ्नो पापहरु को लागि होइन- अपितु हाम्रो लागि दण्डित गरिनेछ किय। हाम्रो चंगाई र शान्तिको लागि – उसले एउटा पीडादायी बोझलाई उठाउनेछ।
यो भविष्यवाणिहरु नासरतको येशूलाई क्रूसमा चढ़ाए पछि मात्र पुरा भयो, जसलाई क्रूसको माथि पीड़ित र दु:खित र ‘छेडिएको’ थियो। तथापि यो भविष्यवाणी उहाँ को यस पृथ्वीमा रहन 750 वर्षहरु भन्दा पहले लेखिएको थियो। तुच्छ मानिने र आफ्नो पीड़ामा भए पनि येशूले यस भविष्यवाणीलाई पूरा गर्नु भयो र अब सबै पछाडी एक जातियहरु र जनजातियहरुको प्रतिनिधित्वग र्नमा सक्षम भए।
6 हामी त सबै भेडाहरु समान भटके का थियौ;
हामी मध्य हरेकले आफ्नो आफ्नो मार्गमा लागेउ;
र यहोवेले हामी सबैलाई अधर्म को बोझ
उनी माथि लाद दिनु भयो।
7 उहाँ सताईनु भयो, र पनि उहाँले सहनु भयो
र अफ्नो मुख खोल्नु भएन;
जुन प्रकार ले भेडो को बलिदान हुने समय
वा भेडा को ऊन काड्ने समय चुपचाप शान्त रहन्छ,
त्यसरीब नै उहाँले पनि आफ्नू मुख खोल्नु भएन।
यो हाम्रो पापहो र धर्मबाट हामी भटकिनु हो, जसको लागि यो आवश्यकछ कि यो व्यक्ति या पुरूषलाई हाम्रो पाप या अपराधहरु लाई आपू माथि लिनु भयो। उहाँ हाम्रो स्थानमा बलि हुनुको लागि शान्तिपूर्वक जाने, विरोध न गर्ने यहाँ सम्म कि ‘आफ्नो मुख न खोलने’ को लागि पनि तैयार रहे। यो ठीक त्यस्तै गरि पुरा भयो जसरी येशू क्रूस माथि स्वेच्छाले जानु भए को थियो।
8 अत्याचार गरेर र दोषलगा एर उहाँ लाई लागे।
त्यस समय को मानिसहरु मध्य कसले उहाँ माथि ध्यान दियो
कि उहाँ जीवत हरुको बीच बाट उठाई लानु हुन्छ?
मेरो नै मनीसको अपराधहरुको कारण उहाँ ले दण्ड लिनु पर्यो।
यो भविष्यवाणीले भन्दछ कि यस व्यक्तिलाई ‘जीवतहरु को बीच बाट उठाइयो ‘, जुन त्यति बेला पुरा भयो येशू क्रूस मा मारिनु भयो।
9 उहाँ को चिहान पनि दुष्टहरुसँग बाडियो,
र मृत्यु को समय उहाँ धनवान को साथि हुनु भयो,
यद्यपि उहाँले कुनै प्रकार को अपद्रव गर्नु भएको थिएन
र उहा न को मुख बाट कुनै पनि छलको कुरा निक्क्लि दैन थियो
येशूको मृत्यु एउटा ‘दुष्ट’ व्यक्तिको रुपमा भयो, यद्यपि उहाँले ‘कुनै प्रकारको अपद्रव गर्नु भएको थिएन’ र ‘उहाँको मुख बाट कुनै छलको कुरा निक्लिएको थिएन’। र पनि, उहाँलाई एउटा धनी पुरोहित अरिमितिया को योसुफ को चिहान मा गाडिए को थियो। यस प्रकार यो पुरा भयो कि येशू दुबै ‘दुष्ट हरुको साथि ठहरिनु भयो’, र साथ मा नै ‘मृत्यु को समय उहाँ धनवानको साथि हुनु भयो’।
10 तापनि उस लाई चकनाचूर र कष्‍टमा पार्न परम प्रभु को इच्‍छा थियो, र परम प्रभु ले उसको प्राणलाई दोषबलिझैँ बनाउनु भए तापनि, उसले आफ्‍ना छोरा छोरी लाई देख्‍नेछ र आफ्‍नो दिन बढ़ाउने छ र परम प्रभु को इच्‍छा उसकै हातमा उन्‍नतहुनेछ। (यशैया 53:10)
यो क्रूर मृत्यु कुनै भयानक दुर्घटना या दुर्भाग्य थिएन। यो ‘परमेश्वरको इच्छा’ थियो।
किनकि यस व्यक्तिको ‘जीवन’ ‘पाप को लागि दोषबलि’ हुनेछ ।
हामी सबै ‘जातिहरुको’ मानिसजो’ हराएका’ छौ। जब येशू क्रूस मा मारिनु भयो,त्यी यो जातियता या सामाजिक पदवी लाई एका तर्फ राखेर, हामी सबै लाई पापदेखि शुद्धगर्नु थियो।
11 उसका प्राणको बेदना पछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ; आफ्नो ज्ञान द्वारा मेरो धर्मी दास ले धेरै धर्मी बनाउनेछ; रउसले तिनीहरु लाई का अधर्म बोक्नेछ।
यहाँ भविष्यवाणी को ढाँचामा परिवर्तन आउद छर विजय प्राप्त हुन्छ। यस भयानिएको नक ‘पीड़ा’ (‘तुच्छ’ मानिएको र ‘जीवतहरु को बीच बाट उठालै जानु हुने’ र ‘चिहान’ को ठहराइनुको पश्चात्), यस दासलाई ‘जीवनको ज्योति’ देख्नेछन।
ऊ फेरी जीवनमा फर्किनु हुनेछ! रएस्तो गर्नमा यो दास ले धेरैलाई ‘धर्मी’ ठहराई दिनु हुन्छ।
‘धर्मी ठहराइनु’ भनेको ठीक त्यसतै हो जस्तो कि ‘धार्मिकता‘ लाई प्राप्तगर्नु। हामीहरुले हेरौ कि ऋषि अब्राहम लाई ‘धर्मी ठहराईएको थियो ‘ या’ धार्मिकता’ दिए को थियो। यो केवल उनको विश्वासको कारण उन लाई दिइ एको थियो। यसै प्रकारले यो दासजो अछूत हुनुको कारण यति अधिक निम्न स्तरको भए कि ‘धेरै’ लाई धर्मी ठहराए या उनीहरुलाई धार्मिकता प्रदान गर्नेछ। यो ठीक त्यस्तै नै हो, जस्तो येशूले आफु क्रूस मा चढे पश्चात् मरेकाहरु मध्य बाट बौरी भइ पुरा गर्नु भयो र अब उहाँ हामीलाई ‘धर्मिकता’ दिन मा सक्षम हुनुहुन्छ।
12 यसै कारण महानहरु संगै उस लाई पनि म एक भाग दिनेछु,
रउसले लुटेको माल समर्थी हरुसित बाँड्नेछ;
किन भने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो,
ऊ अपराधी हरुको गन्तीमा गनियो;
किनकी उसले धेरै पाप बोक्यो ,
र उसले अपराधी हरुका निम्ति मध्यस्थता गर्यो । (यशैया 53:1-12)
यद्यपि यो भविष्यद्वाणी येशूयस पृथ्वीमा आउनु भन्दा 750 वर्ष पहिले लेखिए को थियो, तथापि यो उहाँ द्वारा आफ्नो विवरणमा पूरी भयो जस ले यो प्रमाणित गर्दछ कि यो परमेश्वर को नै योजना थियो। साथै यस ले यो कुरा लाई पनि देखाउछ कि येशू ले अवर्ण को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्छ, जसलाई प्रायः सबै भन्दा निम्न स्तर को श्रेणी को मानिन्छ। सत्य त यो कि उहाँ केवल अवर्णहरु को लागि अपितु साथै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शुद्र को पापहरु को पनि प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरु को पापहरु लाई उठाउन र उनिहरु लाई शुद्धगर्नको लागि आउनु भएको हो ।
उहाँ तपाई र मलाई जीवन को उपहार दिन – दोष र कर्महरु को पापबाट शुद्ध गर्न को लागि परमेश्वर को योजना को केन्द्र को रूपमा आए को हो। के तपाई को लागि यस कि सिम को एउटा बहुमूल्य उपहार लाई पूर्ण रुप ले बुझ्न र यसमाथि ध्यान लगाउन यो कुरा उपयुक्त छैन? यसमा ध्यान लगाउनु को लागि यहाँ अनेक तरिका प्रदान गरिए को छ:
बुझ्नु होस् किन हिब्रू रसंस्कृत वेद एकै व्यक्ति को भविष्यवाणी गर्दछ
4000 वर्ष पहिले ऋषि अब्राहम लाई धर्मी ठहराए को उदाहरण बाट सिखौ
सुसमाचार मा आधारित येशू को जीवन मा बने को फिल्मलाई हेरौ
सोचौ कि येशू द्वारा प्रदान गरिने जीवन को उपहार लाई कसरी प्राप्त गर्ने
लेखक Ragnarप्रकाशित 29/05/2018 14/09/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स जीसस क्राइष्ट, ब्राह्मणर क्षत्रिय को
पिछला पिछला पोस्ट: आउँदै गरेको महान राजा : सयौं वर्ष अघि नामाकरण गरिएको
अगला अगला पोस्ट: भजनसंग्रह 22 को भविष्यवाणीकोरहस्य